PineTab, mutengesi zvakanyanya maererano nePINE64, iyo inotarisira kambani | Linux Vakapindwa muropa
Iyo PineTab yaive yekutengesa zvakanyanya, zvinoenderana neiyi nedzimwe nhau dzakapihwa nePINE64
Maawa mashoma apfuura, PINE64 atumira tsamba yavo yemwedzi nemwedzi ichitiudza nezve kufambira mberi kwavo. Pakati pavo, chimwe chinhu chinomiririra irwo ruzivo rwune hukama ne pinetab, piritsi rekambani iro inogona kubhuka kubva munaJune 10. Kana zvinogona, nekuti, ivo vanoti, masheya akapera mukati memazuva asingasviki matatu (maawa 3). Dambudziko, zvirinani kune isu isu vanokwanisa kuchengetedza rimwe, nderekuti isu tichafanirwa kumirira zvishoma kuti tigamuchire yedu "toy."
Uye ndezvekuti mutsamba, mukuwedzera kune kutiyeuchidza kuti kuchengetedza kwakavhurwa mazuva gumi nemaviri anonoka, vakatiudzawo kuti vachatanga kutumirwa riini: yechipiri hafu yaJuly. Ndiwo chaiwo mwedzi mumwe kubva zvino. Naizvozvo, vekutanga vane rombo rakanaka vanozoigamuchira mukati memazuva makumi matatu kusvika matatu, asi vamwe vanogara muEurope vachiri kufanira kumirira imwe vhiki. Kutaura nezve kunonoka, chikonzero chePineTab chaive mamiriro ekutumira kune zvimwe zvigadzirwa zvePINE30, senge PinePhone uye Pinebook Pro.
Iyo yekutanga PineTab ichatanga kusvika mumwedzi
Ivo havana kutaura kuti mangani PineTab akagadzirwa uye chaizvo kuti mangani akatengeswa, asi ivo vanozviti izvo mazana akatengeswa pazuva. Icho chinhu chakavashamisa uye ikozvino vari kushanda kuti vawedzere kugadzirwa munguva pfupi iri kutevera. Kana vaine rumwe ruzivo rwekupa, ivo vanozozivisa pasocial media.
Kune rimwe divi, PINE64 akatiudzawo nezve iyo PinePhone (isu tichataura nezvayo mune inotevera chinyorwa) uye iyo PineTime, wachi yekambani yakura zvakanyanya mumwedzi miviri yekupedzisira. Chikamu cheiyi shanduko yakaburitswa mu Medium naLup Yuen Lee, uko mugadziri anovimbisa kuti vaisa zvidzoreso zve firmware pasina tambo dzewachi.
Kudzokera kuPineTab, isu tichava nemoyo murefu. Piritsi rinotibvumidza kuyedza Ubuntu Bata pamutengo wakaderera, uye mamwe masisitimu anoshanda futi, zvakafanira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo PineTab yaive yekutengesa zvakanyanya, zvinoenderana neiyi nedzimwe nhau dzakapihwa nePINE64
Chokwadi ndechekuti, ini ndiri wepamusoro palaptop pane piritsi. Asi zvakadaro, piritsi iri rinondibata. Kana ongororo kana ongororo dzikabuda dzichiratidza mashandiro mashoma, ini ndinokurudzirwa kutora imwe.
Jesu Ballesteros akadaro
Ini ndakachengeta iyo pandakangoona iyo yekutanga posvo pane ino blog. Ndinovimba kuve nazvo munguva pfupi uye ndichataura pane zvandakaona. Ndiri kufara zvikuru kuti yakanga iri kubudirira.
Pindura Jesús Ballesteros
PinePhone postmarketOS Nharaunda Yekuverengerwa ichave iripo pre-odha kutanga kwaJuly
LFA (Linux Yevose): iyo distro inounza shanduko dzakadzama